ललितपुरका मेयर चिरिबाबु मर्हजनसँग देउवाले हारे एक सय रुपैंया बाजी – YesKathmandu.com
ललितपुरका मेयर चिरिबाबु मर्हजनसँग देउवाले हारे एक सय रुपैंया बाजी
बुधबार १०, जेठ २०७४
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कतिसम्म राजनीतिक चतुर खेलाडी छन भन्ने बुझ्न यो उदाहरण नै काफी छ । उनले टिकट दिँदा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुसँग यस्ता यस्तो वाजी पनि राखेका रहेछन कि आफूले टिकट दिएको उमेद्धारले हार्यो भने एक लाख रुपैंया लिने,जितेको खण्डमा आफूले एक सय रुपैंया दिने ।
यही बाजीबाट बुझ्न सकिन्छ कांग्रेस सभापति देउवाको चतु¥याई । देउवाको यो दाउको हालै मात्र भण्डाफोर भएको छ । र यस्को भण्डाफोर गरिदिएका छन त्रिविका एक जना उपप्रध्यापकले ।
भएको के रहेछ भने, ललितपुरबाट पहिलो मेयर बन्ने सौभाग्य पाएकाछन चिरिबाबु महर्जन र पार्टी सभापति देउवाबीच यस्तो वाजी चलेको रहेछ ।
सुरुमा देउवाले उनलाई पत्याएका थिएनन् । टिकट दिन समेत अनेक आनाकानी गर्दै आएका थिए । उनीसँगै ललितपुरबाट टिकट माग्नका लागि त्रिविवि बौद्ध अध्ययन विभागका उप–प्राध्यापक डा गौतमवीर बज्राचार्य पनि सँगै त्यहाँ पुगेका थिए । टिकट माग्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रश्न तेर्साए ‘चिरिबाबुले जित्नुहुन्छ त ?’ देउवाको चिन्ता थियो हार्यो भने त बर्बादै हुन्छ ।
उनै उप प्रध्यापक वज्राचार्यले जवाफ फर्काए ‘ ललितपुरमा चिरिबाबु बाहेक अरुले जित्नै सक्दैनन् ।’ नभन्दै नतिजा आयो पनि त्यस्तै ।
अन्ततः चिरिबाबुकै पोल्टामा मेयरको उपाधी पर्यो । टिकट दिने समयमा कांग्रेस सभापति देउवा र चिरिबाबु केही रोचक वाजी पनि भए । चिरिबाबुले यदि मैले हारेँ भने म पार्टीलाई एक लाख रुपियाँ दिन्छु, जितेँ भने मलाई एक सय रुपैयाँ पुरस्कार दिनुहोस् ।’भन्ने प्रस्ताव राखे ।
चिरिबाबुको यो प्रस्ताव देउवालाई मन पर्यो र उनले स्वीकार गर्दै उनालई मेयरको टिकट दिए ।
यसरी बाजी अनुसार ललितपुरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनले जितेका छन भने कांग्रेस सभापति देउवाले वाजी हारे । शर्त बमोजिम उनले ललितपुरका मेयर चिरिबाबु मर्हजनलाई सय रुपैंया पुरस्कार पाउनेभएका छन ।
प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणा ओलीद्धारा बहिष्कार
व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरु
‘विश्वविद्यालयका रुपमा अगाडि बढ्न सक्षम छौं’
सबै जाति, भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरुको संरक्षण एवंम विकास गर्नु सवैको साझा दायित्व हो –प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
केपी ओलीको झटारो भेटेपछाडि ऋषि धमलाको प्रश्नै गायव…
नयाँ सरकारबारे कानुनविद्धका आ—आफ्नै तर्क
दलहरुलाई राष्ट्रपतिको सुझावः निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री नफेरौ
संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आज व्यवस्थापिका वैठक
तरुण दलका यी उम्मेद्धार: विकासको काममा संग्लग्न हुँदा जस्को टाउको फुटाइयो !
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र स्विटजरल्याण्डका राजदूतबीच भेटवार्ता
ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोनमा के कुराकानी भयो ?
बाम उम्मेदवार लालबाबु पण्डितलाई लक्षित गरी बम विस्फोट
मानव तस्करमा तानिए पासाङ र डन्डु शेर्पा
संसदमा दर्ता भयो प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वाशको प्रस्ताव,२५४ सांसदको हस्ताक्षर
सीमा अतिक्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले भने , ‘देशको एक इन्च भूमि पनि मिच्न दिन्नँ’
बाबुरामको साथ छोडेर माओवादीमै फर्किए खिमलाल देवकोटा
एसएसपी सर्वेन्द खनाल समाउदै जाने,अदालत चोख्याउदै जाने